Reverse Logistics Solutions သည် E-Commerce Marketplace | Martech Zone
Reverse Logistics Solutions သည် e-Commerce စျေးကွက်တွင် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုကို အားကောင်းအောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 1 ရက်၊ 2021 ခုနှစ် တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 1 ရက်၊ 2021 ခုနှစ် Gaurav Saran
COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီး စျေးဝယ်မှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံး ရုတ်တရက် လုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်။ ထက်ပိုပြီး 12,000 ဈေးဝယ်သူများသည် ၎င်းတို့၏နေအိမ်များ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသောကြောင့် အုတ်နှင့်အင်္ဂတေစတိုးဆိုင်များကို 2020 ခုနှစ်တွင် ပိတ်ခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲလာသော စားသုံးသူအလေ့အထကို အမီလိုက်နိုင်ရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ e-commerce တည်ရှိမှုကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းလက်လီရောင်းချမှုသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ဤဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးဝယ်နည်းသစ်သို့ စျေးဝယ်ခြင်းနည်းလမ်းသစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် အွန်လိုင်းရောင်းအားတိုးလာသည်နှင့်အမျှ အရင်းခံအဖြစ်မှန်နှင့် ထိမိသွားကြသည်။
ဖောက်သည်များ၏ ပြန်အမ်းငွေကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ လက်လီရောင်းချသူများသည် ပြန်လာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချောမွေ့စေရန်၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် ပြန်လာသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် အမြတ်အများဆုံးအမြတ်များရရှိရန် ခိုင်မာသော၊ နည်းပညာသုံး ပြောင်းပြန်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရပါမည်။ မှိုတက်နေသော ပြန်လာမှုများ၏ ရေစီးကြောင်းကို ဖြတ်ကျော်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ပြင်ပ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီ လိုအပ်သည့် ဆန်းကျယ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးချခြင်းဖြင့် Returns Management စနစ် (RMS အ) ပိုမိုကောင်းမွန်သောမြင်နိုင်စွမ်းနှင့်အဆင့်မြင့်ခြေရာခံလက်လီရောင်းချသူများသည် ပြန်လာမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ဝင်ငွေစီးကြောင်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဖောက်သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
Returns Management System (RMS) ဆိုတာဘာလဲ။
RMS ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုသည် ပြန်လည်ရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်၏ခရီး၏ရှုထောင့်တိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ခြေရာခံရန်အလွန်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သောပြန်အမ်းငွေများလုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုအသုံးပြုသည်၊ တောင်းဆိုချက်တင်သွင်းသည့်အချိန်မှစ၍ မူရင်းထုတ်ကုန်ကိုပြန်လည်ရောင်းချရန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းတွင်ပြန်လည်ထားရှိချိန်အထိ၊ ဝယ်ယူသူ၏ပြန်လာသည် အပြီးသတ်ခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဝယ်ယူသူမှ ပြန်ပေးရန် တောင်းဆိုသောအခါတွင် ပြန်လည်စတင်ခြင်းမှ စတင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ RMS ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ဝယ်ယူသူ၏ ပြန်လာရသည့် အတွေ့အကြုံသည် ဝယ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကဲ့သို့ သာယာကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ RMS ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသည် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များသို့ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များထံ အဆက်ဆက်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် အီးမေးလ်များလိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ၎င်းတို့၏ပြန်လာသည့်အချိန်၌ စားသုံးသူအပ်ဒိတ်များကို ပေးဆောင်ရန် အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
တောင်းဆိုမှုပါဝင်ပြီးသည်နှင့်၊ ဖြေရှင်းချက်သည် လက်လီရောင်းချသူကို မြင်နိုင်စွမ်းနှင့် ဒေတာအချက်အလက်များ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြင့် ပြန်လာမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချိန်ကို ခန့်မှန်းကာ ဖောက်သည်၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို စောင့်ကြည့်ရန် ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဈေးဝယ်သူတစ်ဦးသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် လက်လီရောင်းချသူများအတွက် အဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာသည် - ပေးရ.
ပြန်လည်ပေးအပ်သည့်မူဝါဒများကို စားသုံးသူအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်စေပါသည်။ $ 15.9 ဘီလီယံအထိ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။
ပြန်လာမှု၏ ကနဦးအဆင့်များအတွင်း ခိုင်မာသော RMS ဖြေရှင်းချက်မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် မြင်နိုင်စွမ်းသည် အွန်လိုင်းကုန်သည်များ၏ နက္ခတ်ဗေဒဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကို သက်သာစေနိုင်သည်။ ပြန်လည်ပေးပို့သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ နောက်တဆင့်မှာ ပြန်ပို့သည့်ထုတ်ကုန်၏ကုန်ကျစရိတ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ဂိုဒေါင်သို့ပြန်ပို့ခြင်းထက် စျေးပိုနည်းခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသော ပို့ဆောင်ခနှင့် ပတ်သက်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ e-commerce လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ဖောက်သည်အား ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုပေးပို့ပြီး အဟောင်းကိုသိမ်းဆည်းရန် ၎င်းတို့အား ပြောနိုင်သည်။ RMS ပလပ်ဖောင်းသည် ဤဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော ဒေတာကို ပေးဆောင်သည်။
အချို့သောကုန်လှောင်ရုံများသည် ပြန်လာခြင်းဖြင့် ရေမြုပ်သွားသည်၊ ထို့ကြောင့် RMS ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏စာရင်းလိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံမှုနှင့် ဖောက်သည်၏တည်နေရာနှင့် မည်မျှနီးစပ်သည်ကို အခြေခံ၍ မည်သည့်တည်နေရာသည် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဆိုက်ကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၊ ထုတ်ကုန်သည် စာရင်းထဲသို့ ပြန်ဝင်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်မီတွင် လိုအပ်သော ပြုပြင်မှုနှင့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပြန်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ပါဆယ်ထုပ်ခြေရာခံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း။. ကုန်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချောမွေ့စွာ ဖယ်ရှားခြင်း၊ လိုအပ်သော ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ဖောက်သည်နှင့် လုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးအတွက် ပြန်လာခြင်းကို အပြီးသတ်ပါသည်။
အဆုံးမှအဆုံး RMS ဖြေရှင်းချက်ကို ပေါင်းစည်းခြင်းသည် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ရှုထောင့်မှ e-commerce လုပ်ငန်းများအပေါ် သိသာထင်ရှားပြီး ကြာရှည်ခံသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိသည်။ RMS ကိရိယာများနှင့် နည်းပညာသည် ကုမ္ပဏီများအား အမြတ်အစွန်းများ တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ စျေးကြီးသော ပြန်အမ်းငွေများမှ ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းနှင့် ဖောက်သည်စိတ်ကျေနပ်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ လိုချင်သော ရလဒ်ကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ စားသုံးသူများသည် e-commerce ကို ဆက်လက်လက်ခံလာသည်နှင့်အမျှ RMS စွမ်းရည်များသည် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လက်လီရောင်းချသူများအား လိုအပ်သော စိတ်ငြိမ်သက်မှုကို ပေးပါသည်။
ReverseLogix သည် လက်လီ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် 3PL အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အထူးတည်ဆောက်ထားသော တစ်ခုတည်းသော အဆုံးမှအဆုံး၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ပြီး အပြည့်အဝ ပေါင်းစပ်ထားသော ပြန်ပေးငွေယူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ B2B၊ B2C သို့မဟုတ် hybrid ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ReverseLogix ပလပ်ဖောင်းသည် ပြန်စသည့်ဘဝစက်ဝန်းတစ်ခုလုံးကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးပြီး အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။
ReverseLogix ကို အားကိုးသော အဖွဲ့အစည်းများသည် အလွန်သာလွန်ကောင်းမွန်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ ဖောက်သည် အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပေးသည်။ပိုမိုမြန်ဆန်သော အလုပ်အသွားအလာများဖြင့် ဝန်ထမ်းအချိန်ကို ချွေတာပြီး 360⁰ အချက်အလက်များသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းဖြင့် အမြတ်ငွေများ တိုးမြင့်ပါ။
Tags: ၃.၃b2b2cb2cအီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုပြန်လည်ရောက်ရှိကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပါဆယ်ထုပ်ပြန်လည်ရယူခြင်း။ပါဆယ်ထုပ်ခြေရာခံပါဆယ်ထုပ်ခြေရာခံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း။လက်လီပြန်များပြန်အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပေးသည်။ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုကို ပြန်ပေးသည်။ပြန်လာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကို reversereverselogixRMS အ
Gaurav Saran သည် CEO ဖြစ်သည်။ ReverseLogixလက်လီ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် 3PL အဖွဲ့အစည်းများအတွက် တည်ဆောက်ထားသော တစ်ခုတည်းသော အဆုံးမှအဆုံး၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ပြီး အပြည့်အဝ ပေါင်းစပ်ထားသော ပြန်ပေးငွေယူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်သည်။ ReverseLogix မတည်ထောင်မီ Saran သည် Microsoft တွင် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများအတွက် လုပ်ငန်းရောင်းချမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် အစောပိုင်းအဆင့်မှ စတင်တည်ထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီကြီးများအထိ အောင်မြင်စွာ အသွင်ပြောင်းသော start-up အဖွဲ့အစည်းများစွာတွင် ခေါင်းဆောင်ရာထူးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
E-Commerce ၏မျက်နှာသစ်- စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် Machine Learning ၏သက်ရောက်မှု
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစာရင်းအင်း 2021- ဒေတာသည် ဘယ်တော့မှ အိပ်မပျော် 8.0